I-P & M ye-HAFT KOMPUTEROWY → Intengiso yeempahla • Iimpahla zokusebenza
Ingubo ekhompyuter yobugcisa
Jonga umnikelo wethu
Fumanisa iimveliso zethu
Siyinkampani yasePoland enezithethe, umvelisi kunye nomhambisi
iimpahla eziphezulu zomsebenzi kunye neengubo zentengiso.
Igumbi lakho lokuthunga
-nokubakho okunokwenzeka kwimveliso
Sinegumbi lethu lokuthunga - sithunga ngokuchanekileyo ngokokulindeleyo. Amandla ethu okulungisa asivumela ukuba sivelise amawaka ezinto ngenyanga.
izinto ezenziweyo ngenyanga
nokuziswa emnyango wakho.
Zonke iodolo zisenziwa ngokukhawuleza, ngemihla emiselweyo, emva koko sizithumela ngekhuriya okanye kwisitshixo secala ukuze zikwazi ukufikelela kuwe ngokukhawuleza.
I-P & M-igumbi elikhokelayo lokuthunga ikhompyuter
I-P & M ligumbi lokuthunga lasePoland elisebenza eRawa Mazowiecka ukusukela ngo-1995. Sinikezela ngeenkonzo zokuthunga, ukusika, uku-ayina kunye neelebheli.
Senza ngokukhethekileyo kwimfekethiso yecompyuter kwintengiso kunye neempahla zomsebenzi.
Unikelo lwethu lubhekiswa kwiinkampani kunye nabathengisi beenkonzo. Ukuba unomdla wokuthenga kwisiqwengana esinye, nceda undwendwele eyeyethu Ivenkile ye-Intanethi.
I-P & M yenziwe ngabantu. Ngabasebenzi abaqeqeshiweyo nabanamava abaya kukuvuyela ukukunika iingcebiso kunye noncedo ekukhetheni obona buchule kunye noyilo ukuze iimveliso zakho zibonakale zikhethekileyo.
I-P & M - izixhobo kunye namathuba
Igumbi lokuthunga i-P & M inezixhobo zale mihla eziyivumayo ukuba ihlangabezane nolindelo oluphezulu lwabathengi.
Ipaki yethu yomatshini ibandakanya, phakathi kwabanye: oomatshini bokutshixa, iinaliti ezimbini, i-rendki, iiwotshi ngaphezulu, izixhobo zokubopha, umatshini wokuhambisa, oomatshini bokuchwela, oomatshini bokuwisa, oomatshini bokuhambisa izixhobo, iitafile ezinyibilikayo.
Sikulungele ukuzalisekisa iodolo yakho. Siyakumema kwintsebenziswano.
Paweł Kubiak - umnini wenkampani
Dibana nenkampani yethu
Ipaki yoomatshini bale mihla
Umgangatho ophezulu weemveliso
Amava amaninzi okuthunga
Siyavuya ukwaba ulwazi kunye nokunika iingcebiso
Kumaphepha ebhlog yethu uza kufumana ulwazi malunga nesithembiso sethu kunye neengcebiso ezininzi ezixabisekileyo malunga nokuqhubekayo kushishino lwethu.
Jonga amanye amangeno
Ukuprintwa okungaphezulu kwe-DTG-ukubakho kokushicilela kwisiqwengana se-DTG ngaphezulu kweyona ndlela intsha yokumakisha ...
I-T-shirts eziprintiweyo zokuhombisa iikhompyuter zanamhlanje zisetyenziselwa ukuhombisa iintlobo ezahlukeneyo zamalaphu ...